I-China i-China Ixabiso elisezantsi leemveliso ngokuthe ngqo kwi-Polyester Pillow yomvelisi-Rayson | Rayson
Le mveliso yi-hypoallergenic. Amalaphu ayo awavumeli ukufuma okuyiyo ecosystem efanelekileyo yeebhaktiriya kunye neentsholongwane ezizalela ukwakha.
1.Uhlala umandlalo wakho ixesha elingakanani?
Yonke imatrasi yahlukile. Ukuba uphosa ebusuku okanye uvuke ngentlungu lixesha lokuba ufumane umatrasi omtsha nokuba ungakanani na. Sincoma ukuba ujonge i-tag yomthetho kwaye utshintshe ubuncinci yonke iminyaka esibhozo.
2.Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
I-LC kumbono / nge-TT, i-30% yeDeposi kunye ne-70% eseleyo ichasene neekopi zamaxwebhu okuhambisa witinin iintsuku ezisi-7 zomsebenzi.
Ndingazifumana njani iisampulu
Emva kokuba uqinisekise umnikelo wethu kwaye usithumele iindleko zesampulu, siya kugqiba isampulu ngaphakathi kweentsuku ezili-15 ~ ezingama-20. Ungacela inkampani yokubonisa ukuba ithathe isampulu kwinkampani yethu okanye ungasithumela i-DHL, i-FedEx okanye i-UPS yokuqokelela inombolo yeakhawunti, singathumela isampulu kuwe ngeakhawunti yakho.
Abathengi abafuna ukwazi ngakumbi ngemveliso yethu entsha okanye inkampani yethu, qhagamshelana nathi nje.
Silandela ngokungqongqo iinkqubo zolawulo lomgangatho esemgangathweni ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana okanye zigqithile kulindelo lwabathengi bethu. Ukongeza, sibonelela ngeenkonzo zentengiso yasemva kwexesha kubathengi kwihlabathi liphela.
Ukusukela oko kwasekwa, uRayson ujonge ukubonelela ngezisombululo ezibalaseleyo nezinomdla kubathengi bethu. Simisele eyethu i-R & D iziko loyilo lwemveliso kunye nophuhliso lwemveliso.
Sithembisa ukuba iimveliso zithunyelwa kubathengi zikhuselekile kwaye zivakala. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukwazi okungakumbi malunga nathi, Tsalela umnxeba ngqo.
I-Rayson Global Co, Ltd yindibaniselwano ye-Sino-US, esekwe ngo-2007 ebekwe eShishan Town, eFoshan High-Tech Zone, kwaye ibekwe kufutshane namashishini adumileyo anjengeVolkswagen, iHonda Auto neChimei Innolux. malunga nemizuzu engama-40 ngemoto ukusuka eGuangzhou Baiyun International Airport kunye neCanton Fair Exhibition Hall. Ofisi yethu eyintloko " JINGXIN " Yaqala ukwenza intambo yasentwasahlobo yokuvelisa umatrasi kwimveliso yangaphakathi ngo-1989, ukuza kuthi ga ngoku, iRayson ayisiyiyo kuphela umzi-mveliso woomatrasi (i-15000pcs / inyanga), kodwa ikwangomnye umatrasi omkhulu we-inverspring amalaphu ephothiweyo (iitoni ezili-1800 / inyanga) abavelisi baseTshayina abanabasebenzi abangaphezu kwama-700. Ngaphezulu kwe-90% yeemveliso zethu zithunyelwa eYurophu, eMelika, eOstreliya nakwezinye iindawo zehlabathi. Sibonelela ngezixhobo zoomatrasi eSerta, Sealy, Kingkoil, eSlumberland nakwezinye iimveliso zomatrasi ezidumileyo. I-Rayson inokuvelisa umatrasi wasentwasahlobo, umatrasi wasentwasahlobo oqhubekayo, umatrasi wasentwasahlobo oqhubekayo, umatrasi onamagwebu enkumbulo, umatrasi wegwebu kunye nomatrasi we-latex njl
I-Foam eQinisekisiweyo yeKhonkco ephezulu yePocket Spring Matress
Olona hlobo luPhezulu lweNtlakohlaza yeMatress kuMboneleli
Ihowuliseyili China Wholesale Polyester Sleeping Pillow Factory